थाहा पाउँनुहोस,भिण्डी खा’नुको यति धेरै फाइदाहरु! पुरा पढी सेयर पनि गर्नुहोस् । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
थाहा पाउँनुहोस,भिण्डी खा’नुको यति धेरै फाइदाहरु! पुरा पढी सेयर पनि गर्नुहोस् ।
काठमाडौं– भिण्डी के हो ? सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । यो तरकारीका रुपमा सबैले प्रयोग गरेका हुन्छ । कतिपय मानिसलाई भिण्डी मनपरे पनि केहीले यसको तरकारी मनपराउँदैनन् ।
Previous एक जिल्लाको मतले मन्त्रीबन्न योग्य हुने, कुलमानसँग ३ करोड नेपालीको मत छ, उहाँले किन नहुने ?
Next पोखरीमा दुई छोरी डुबे, उद्धार गर्न गएकी आमा पनि फर्कन पाईनन,भावपुर्ण श्र’द्धाञ्जली !😓